Pakistan: Sazin’ny bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2018 13:57 GMT
Koa dia nahatratra izany ianao! Ny “sazy iombonana” no lamaody fialantsiny vaovao ampiasain'ireo governemanta eran-tany. Na amin'ny fandraràna ny blaogy izany na manapoaka baomba amin'ireo olon-tsotra tsy manan-tsiny, ny “sazy iombonana” dia toa fitaovana “safidy” amin'ireo fitaovana eo amin'ny fahefana.
Aorian'izany (amin'ity lojika tsy voarindra ity), dia nopotehiko avokoa ny taratasy rehetra teo amin'ny kitendriko satria tsy nandeha ny ‘S’ rehefa niezaka nitendry azy imbetsaka aho mba hamaritana ny lehiben'ny firenena iray matanjaka ary ny hany napoitrany dia hoe ‘hithead’.
Tsapako fa ity politikan'ny sazy iombonana ity dia tsy handeha, satria tsy maintsy nividy solosaina finday vaovao aho ary farany dia nandaniako vola be – tahaka ny ataon'ireo rehetra eo amin'ny fahefana izay mampihatra ity politika somary adala ity. (Amen!)
Amin'ny angona lahatsoratra mahaliana avy amin'ireo bialogera Pakistaney amin'ity herinandro ity, Jaded manazava ny antony mahatonga azy voahelingelina; Glasshouse manadihady ny taratasin'i Musharaf; Windmill mifidy ny The Economist; Adil Najam miresaka momba ny demokrasia any Pakistan; Sabizak manala-baraka ny fantsona ARY; Teeth Maestro manasongadina ny politika vaovaon'ny praiminisitra; ary farany, mampiseho ny nahandroko rehefa misy voina aho.
Faly koa aho mampahafantatra ny Pakcast, ho an'ireo tsy mahafantatra izany. Pakcast dia fandraketam-peo isan-kerinandro misy ny fifanakalozan-dresaka eo amin'i Pakistan sy ny Tandrefana ary atolotr'i Ethan Casey sy Nasir Aziz. Manoro hevitra ny rehetra aho mba hihaino izany.
Ankehitriny dia handeha hividy televiziona vaovao aho. Novakiako ilay farany, anisan'ireo saziko iombonana noho ny fitsindriana tsy nahy ny tambanjotra Fox News raha niezaka nanova fantsona.